LiFePO4 Battery Factory, shirkado - Shiinaha LiFePO4 Soosaarayaasha Baytariga
Muhiim u ah Kaydinta Qorraxda ee Qoryaha Baytariga Batiyaalka ee loo yaqaan 'Lifehi4 Battery Cellpopo4 3.2V 105Ah
Bateriga dib loo soo celin karo ee PLM-105A 3.2V 105Ah ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awooda ugu sareysa ee suurtagalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Dib-u-cusbooneysiin Prismatic LiFePO4 Battery 48V 12Ah Cell Battery for Boat ， Car, Power Supply Station, Weeder
Dib loo cusbooneysiin karo baytariga PLM-12A 48V 12Ah batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sarreysa ee suurta galka macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Dib-u-cusbooneysiin Cilindrical LiFePO4 Battery 26650 3.6V 5Ah Cell Battery for Bluetooth Speaker, Alaabta ， Tooshka Korontada, E-bike
Bateriga dib loo soo celin karo ee PLM-26650 3.6V 5Ah ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awooda ugu sareysa ee suurtogalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Dib-u-cusbooneysiin Liilubil LipobPi4 Batrool 14500 3.7V 800mAh Battery Cell loogu talagalay Afhayeenka Bluetooth, Alaabta ， Clock
Dib loo cusbooneysiin karo baytariga PLM-14500 3.7V 800mAh batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sarreysa ee suurta galka macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Dib-u-celin karo Cylindrical LiFePO4 Batteriga 32700-4S 12.8V 6Ah Xidhmada Batriiga Nidaamka Qalabka Aaladda Gawaarida aadka u korantada
Dib loo cusbooneysiin karo baytariga PLM-32700-4S 12.8V 6Ah batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sareysa ee ay suurtagal ku tahay macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
3.2V 10Ah Deep Cycle Dib-u-buuxin kara Lithium Li-ion Battery 38120S / Baytariyada LiFePO4 Jumlada Nidaamka Kaydinta
Bateriga dib-u-buuxin kara ee PLM-38120S 3.2V 10Ah ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awoodda ugu sarreysa ee suurtogalka ah ee macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Muuqaalka LCD 48 48 Volt Reley Resiliable Li Liion Lithium 48V 200AH Lifepo4 Xirmooyinka Batroolka ee Solar Telecom oo ay la socdaan BMS iyo Charger
Dib loo cusbooneysiin karo baytariga PLM-200A 48V 200Ah batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sareysa ee suurogal ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Dib-u-cusbooneysiin LiFePO4-3 Batariga 24V / 36V / 48V 50Ah / 60Ah / 80Ah Cell Battery for Boat ， Car, Station Supply Power, E-bus
Dib loo soo celin karo PLM-LiFePO4-3 24V / 36V / 48V LiFePO4-3h batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sareysa ee ay suurtagal ku tahay macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Dib u Soo Kordhinta Batriska LiFePO4 Battery 48V 100Ah Xidhmo Battery Oo Loogu Talo Galay, Gawaarida, Saldhigga Korantada
Bateriga dib-u-cusboonaysiinta ee PLM-100A 48V 100Ah ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awoodda ugu sarreysa ee suurtogalka ah ee macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Muhiim u ah Kaydinta Qorraxda ee Nooca Baytariga Batroolka ah ee loo yaqaan 'Lithium Battery Cellpopo4 48V 25Ah'
Bateriga dib-u-cusboonaysiinta ee PLM-25A 48V 25Ah ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awoodda ugu sarreysa ee suurtagalka ah ee macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Dib-u-cusbooneysiin Cilindrical LiFePO4 Battery 32650 3.2V 6Ah Battery Cell for Bluetooth Speaker, Alaabta ， Tooshka Korontada, E-bike
Dib loo cusbooneysiin karo baytariga PLM-32650 3.2V 6Ah batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sarreysa ee suurta galka macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Dib-u-celin karo Bristaal LiFePO4 Baytariga 3.2V 26Ah Qolka Baytariga ee Loogu talagalay Boat ， Gawaarida, E-bike
Dib loo cusbooneysiin karo baytariga PLM-26A 3.2V 26Ah batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sarreysa ee suurta galka macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.